Lalao An-dahatsary Manome Topimaso Kely Somary Hafa Momba Ny Revolitiona 1979 Iraniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Avrily 2017 4:59 GMT
Ho an'ireo mpanatontosa sarimihetsika, mpanoratra sy mpanao gazety, mijanona hatrany ho lohahevitra manintona ny firenena Iraniana. Saingy ny voamaso ijerena ilay firenena ka tsy ahitàna fitanilàna raiki-tampisaka, fitsaràna an-tendrony, na fametrahana azy ho hafahafa dia fanamby iray mpiseho matetika. Matetika ireo ezaka manana ny hasiny nataon'ireo tandrefana mba “hanalàna sarona” an'i Iràna sy hanehoana ny lafy “maha-olona” ao aminy no nandray ireo fomba fijery tatsinanana mahazatra manaratsy ilay firenena sy ny tantarany. Ary marobe amin'ireo asa vitan'ny Iraniana ho an'ireo Amerikana Tavaratra sy Eoropeana no nitondra nankany amin'ny fampihenana ny fifamahofahoan'ilay firenena ho lasa heviteny tsotra fotsiny ho fanamoràna ny fanjifan'ireo tandrefana.
Tantara an-dahatsary iray nataonà Iraniana, anefa, no mahavita zavatra tsy fahita firy hanomezana fitantaràna azon'ny rehetra raisina sy tena marina momba ny tantaran'i Iràna tsy nasiana marimaritra iraisana, na ny votoaty, na ny asa famoronana tao anatiny. Ny Revolisiona 1979 : Zoma Mainty dia manome sehatra fialamboly iray ho an'ireo tia milalao miaraka aminà tsiron-tantara mba hitrandrahana ny iray amin'ireo revolisiona malaza indrindra tamin'iny taonjato lasa iny, ary mamelombelona hatrany ireo hetsika efa tany amin'ny 36 taona lasa izay nisy fiantraikany nahery vaika tokoa tamin'i Iràna.
Ny hetsika ao anatin'ilay lalao dia manomboka aorian'ilay revolisiona, fakàna am-bavany an'ilay voalohany tompondraharaha ao amin'ny tilikambon'ilay fonja malaza ao Evin, nataon'ilay bibiben'ny taorian'ny revolisiona Iraniana — Assadollah Ladjevardi, mpiambina an'i Evin no sady lehiben'ny fampanoavana ao Tehran. Lavitra azy ny handray ny fomba fanao manatsotsotra zavatra amin'ny filazana ho lafatra ny fotoana talohan'ny revolisiona tao Iràna, ezahan'ilay lalao ny handalina ny toedraharaha politika izay nitondra tamin'ny fidarabohan'ny Shah, ary eo dia manome fomba fijery voalanjalanja momba ireo hery miasa ao anatin'ny firenena.